Yangu Apple Watch Series 2 Yekutenga Chiitiko | Ndinobva mac
Yangu Apple Watch Series 2 yekutenga ruzivo
Pakati pevhiki dzakatungamira kune yakakosha, ini handina kumira kupindura pane runyerekupe uye kudonhedza kweapuro wachi. Takati ichave ine GPS uye barometer, pakati pezvimwe zvinhu. Izvo zvingave zvakatetepa uye zvine simba, iine bhatiri yakawanda etc. Zvimwe zvinhu zvakazove zvechokwadi uye zvimwe kwete, izvozvi. Vamwe vaverengi veApplelizados vakataura kana kutondinyorera pane yangu yega Twitter account (@josekopero) kundiudza kuti ndizvigadzirire uye kundikurudzire kutenga. Ndakanga ndisina chokwadi, asi ndaida chaizvo. Pakasvika hurukuro yakakosha ndakanzwa kuora moyo, Ini ndaitarisira zvimwe. Ini ndakapindawo pawebhu panguva iyo yaivandudzwa kuti ichengetedzwe. Pakati pekukwira kwemutengo uye nekugadziriswazve kwekatalog, ndakange ndagumbuka ndikasarudza kusaita.
Ndipo pandakaramba kuitenga ndokutanga kupa zvikonzero zvekusatenga. Vaya vashandisi vanogona kunyatsoishandisa, hongu, zvakakurudzirwa zvachose. Asi pachayo, iyo Apple Watch ndeye whim, yakanaka wachi, uye inodhura, yemafashoni chishongedzo. Zvakanaka, hapana, izvo zvandazvishingisa kuti ndiwane uye Ini ndichakuudza nezve ruzivo rwanhasi kuburikidza neApple Chitoro kana uchitenga. Kunyatsoteerera.
1 Dambudziko reApple Watch kusarudza
2 Tsanangudzo uye zvakakosha zvekutengesa
Dambudziko reApple Watch kusarudza
Sarudzo dzangu dzaive dzakajeka. Inenge chena sirivheri toni aluminium, uye 42mm muhukuru. Iyo bracelet yaigadzirwa nesilicone, kunyangwe anga asati afunga pamusoro pevara kana Series yaaizotenga. Nekuda kwezvinhu zvitsva zvakaunzwa muChikamu 2, pamwe zvaisave nyore kwandiri kushandisa iwo maEuro zana asi asi… ndiyo nyowani. Iyo imwe iine mbiri-musimboti processor zvakare, asi ndiyo yekare iya neheti nyowani.
Uye ini, wandiri kufambidzana neApple nhau nemoyo, ndakatadza kusarudza modhi yakanga isiri iyo nyowani, kuti usazonzwa uine mhosva gare gare. Izvi ndizvo zvandaikuudza nhasi nezve iyo Apple zano re "rezana zana euros", uye inozivikanwa "zvakanaka, sezvo isu takapedza ...". Mukupedzisira, pakati pezvimwe zvinhu nezvimwe ndakasarudza iyo nyowani, kunyangwe Ini ndaitya kuti zvaisazove zviripo muApple yeMurcia. Ndakafunga: kana iripo, ndinoitenga iyo, uye kana isiri iyo, saka ndinosarudza iyo iine 100 mauro mashoma, iyo Series 1, uye kuti ndinozvichengeta.
Chokwadi, chaive, uye ruvara uye saizi yandaida. Yekupedzisira mutengo € 469, hapana kana imwe kana imwe shoma.
Tsanangudzo uye zvakakosha zvekutengesa
Garandi? Makore maviri. Ivo havana kundiudza chero chinhu nezve Apple Kutarisira kana nyaya dzinoshamisa. Makore maviri uye ndizvozvo, ehe, kuora mwoyo kunouya pane tambo. Ini ndasarudza iyo chena, yaitaridzika kunge yakanaka kwazvo kwandiri uye hongu, ndizvo. Dambudziko nderekuti iyi hongu kana hongu. Ivo havatenderi iwe kusarudza imwe panguva yekutenga. Kana iwe uchida zvimwe, unogona kuzvitenga zvakasiyana.
Kunyangwe zvese, chave chiitiko chakanaka kwazvo chekutenga. Haisi nguva yekutanga, itsika kuti isu tiende kuchitoro kunotora chimwe chinhu tochivhura ipapo ipapo. Sezvo yaive yangu yekutanga Apple Watch, ivo vaifanira kutsanangura zvese kwandiri, kunyangwe ini ndanga ndatogadzirira maererano nedzidziso yeiyo inoshanda system uye zvitsva zvayo. Ndinovhura bhokisi, ndoriburitsa ndokupfeka. Inonyaradza, yakachengeteka, inofadza. Mune imwe maminetsi zvaiita sekunge anga agara achipfeka. Hazviratidzike sechinhu chisina kusimba kwandiri, asi chimwe chinhu chakanaka uye chakanaka chandinopfeka paruoko rwangu.
Mushandi aindipinda anga aine kuseka kwakawanda uye aive akanaka kwazvo. Izvi zvakajairika muApple Chitoro. Ivo vanoziva kwazvo kunyatsoita kuti unzwe zvakanaka iwe uripo., uye usafunga zvisizvo. Kutanga akandibvunza nezve modhi yandaida, ndakamuudza iyo chena. "Ah, very good taste, ndiyo yandinayo," akadaro achisimudza ruoko rwake. Sezvo chako chaive chizvarwa chekutanga, takafananidza skrini pamwe nezvimwe zvinhu. Uye ndinofanira kutaura kuti inoratidza zvakawanda.
Ini ndinokurudzira iyo Apple Watch Series 2 izvozvi? Kana uchinyatsoda, hongu, kana kwete, kwete. Zvakareruka sekudaro. Kuti uwane mamwe maratidziro uye ruzivo ona zvimwe zvakatumirwa nezve wachi. Ndatenda nekurudziro yeavo vanonditevera uye vanyore paTwitter nekwaziso kune vese vaApplelizados vaverengi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Yangu Apple Watch Series 2 yekutenga ruzivo
Saka iwe unogona kugovana mafaera uchishandisa iyo Notes application mu macOS Sierra
Mashandisiro ekushandisa iyo nyowani Kudzora Center muIOS 10 (II)